गरिबीको नङ्ग्राले चिथोरिएको व्यक्तिले एनआरएन हाँक्न सक्लान ? - Enepalese.com
गरिबीको नङ्ग्राले चिथोरिएको व्यक्तिले एनआरएन हाँक्न सक्लान ?
इनेप्लिज २०७१ चैत १ गते २:४९ मा प्रकाशित
लक्ष्मीले बरदान दिएका परिश्रमी व्यक्तित्वहरुले कुर्सि हाँकेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय एनआरएन हाँक्न आर्थिक सम्पन्नता हुनु आवश्यक देखिएको छ । त्यो भएन भने संस्था चलाउन र खर्चले धन्न नसक्ने देखिएको छ । धनि हुनुहुन्न भने ससुरालीले सबै व्यवस्था गरिदिँदैनन् । खर्च पानीको चाँजो मामाले गरिदिँदैनन । पूर्व ,पश्चिम, उत्तर र दक्षिण हिँडडुल गर्न लक्ष्मीको तारतम्य आफैंले मिलाउनु पर्ने हुन्छ ।
धन बोरामा हाली ब्रम्हाण्ड निस्कनु पर्छ । एनआरएनहरुका समस्या सुन्नुपर्छ र समाधान गर्नुपर्छ । जुन काम घरमै बसी–बसी गर्न सम्भव हुँदैन । घर बाहिर निक्लनै पर्छ, त्यो व्यवस्था मिलाउन बोरामा बिटाका–बिटा पैसा भएकै हुनुपर्छ । कार्यकाल भर भ्रमण नै भ्रमणमा बिताउनु पर्छ । हवाई जहाजको हवाई जहाजमा कार्यकाल जाने हुनाले अर्थ चाहिन्छ ।